ရောင်စုံကြောင်သူပုန် စစ်ဆင်ရေး | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Short Story » ရောင်စုံကြောင်သူပုန် စစ်ဆင်ရေး
Posted by weiwei on Aug 15, 2011 in Short Story | 25 comments
wei's story ေၾကာင္သူခိုးမ်ား
အိမ်ရှင်မတစ်ယောက် ကြောင်သူခိုးများနှင့် ရင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရသည်မှာ ယခုဆိုရင် ရ နှစ်တိုင်ခဲ့ပါပြီ။ အစပထမတုန်းက အဝါရောင်သူခိုးတစ်ကောင်နဲ့သာ ရင်ဆိုင်ခဲ့ရာမှ အခုတော့ (အဝါ၊ အဖြူ၊ အနက်၊ အကျား) ရောင်စုံအဖွဲ့တစ်ခုအနေဖြင့် အင်အားအခိုင်အမာဖြင့် ကျူးကြော်ရန်စနေပါတော့တယ်။
ပေ ၄ဝ ၊ ၆ဝ ရှိသော ခြံဝင်းလေးအတွင်းတွင် ပေ ၃ဝ ၊ ၄ဝ ရှိ တစ်ထပ်တိုက်လေးတစ်လုံးကို အနောက်ဘက်ခြံစည်းရိုးကိုကပ်ပြီး ဆောက်ထားပါတယ်။ သစ်ပင်ပန်းပင်များနှင့် လေကောင်းလေသန့်ရရှိသော ရပ်ကွက်တစ်ခုအတွင်းတွင် တည်ရှိသော်လည်း ပြူတင်းပေါက်ဖွင့်ရန် အခက်အခဲများဖြင့် ကြုံတွေ့နေရပါတယ်။
ဖြစ်ပုံက ဒီလို …..
ရပ်ကွက်အတွင်းမှ ဆိုးသွမ်းငတ်ပြတ်နေသော ကြောင်ထီး ၄ ကောင် ခြံဝင်းအတွင်း ဝင်ရောက်နေရာယူပြီး အိမ်ထဲကိုဝင်ရန် အချိန်ပြည့်ချောင်းနေကြပါတယ်။ အိမ်ရှေ့မျက်နှာစာဘက်ကို ထွက်မောင်းလို့ရပေမယ့် နောက်ဘေးဘက်ကို လူဝင်လို့မရတဲ့အတွက် သူတို့အတွက် အသားစီးရနေပါတယ်။ ခေါင်းမိုးပေါ်မှာ ခပ်တည်တည်နဲ့အိပ်နေကြတာကလဲ အသဲယားစရာကောင်းလှပါတယ်။
အိမ်ထဲမှာ အိမ်ရှင်မတစ်ယောက်ထဲ အလုပ်ရှုပ်နေတဲ့အချိန်ဆိုရင် သူတို့တွေပိုပြီး သတိထားချောင်းနေကြတယ်။ ဈေးထဲကနေ ခြင်းတောင်းတစ်လုံးဖြင့် ဈေးဝယ်ပြီး ပြန်လာတဲ့ အိမ်ရှင်မကလဲ သတိလွတ်လို့မရဘူး။ အိမ်ထဲဝင်ပြီးတာနဲ့ အိမ်ရှေ့တံခါးကို ပြန်ပိတ်ရမယ်။ မီးဖိုထဲရောက်တာနဲ့ အိုက်လှောင်နေသဖြင့် ပြူတင်းပေါက်တစ်ခုဖွင့်လျှင် အဲဒီပြူတင်းပေါက်နားမှာ လူကပါ ရပ်နေရပါတယ်။
ပြူတင်းပေါက်ဖွင့်ပြီး အပေါ့သွားချင်လို့ အိမ်သာထဲခဏဝင်လိုက်လို့ကတော့ ခြင်းထောင်းထဲက ပုဇွန်အစိမ်းတစ်ထုပ် အထုပ်လိုက် ပါသွားပြီသာမှတ်ပေတော့။ ငါးအစိမ်းတစ်ကောင်လောက်ကို အသာလေးမသွားနိုင်လောက်အောင် အင်အားကြီးမားပါတယ်။ အသား ငါး ပုဇွန် ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ရတာ အကုန်ချီပြီး ပြူတင်းပေါက်ကနေ ခုန်ဆင်းပြေးပါတယ်။ အိမ်ရှင်မ ဒေါသအမျက်ချောင်းချောင်းထွက်ပေမယ့် ဘာမှမတတ်နိုင်ရှာဘူးပေါ့။
အိမ်ရှင်မရဲ့ ပုံသဏ္ဍာန်ကိုလဲ ကြည့်ပါအုန်း။ မီးဖိုချောင်ထဲမှာဝတ်တဲ့ ဧပရွန်ရှေ့အိပ်ထဲမှာ သေနတ်တစ်လက်ထည့်လို့။ သေနတ်ထဲမှာလဲ ကျည်ဆံအပြည့်နဲ့။ ကြောင်ရိပ်မြင်တာနဲ့ အလေ့အကျင့်ရပြီးသား သေနတ်ထုတ်ပြီး ပစ်လိုက်ပြီးသား။ ထိမိလို့ကတော့ အီစိမ့်နေအောင် နာမယ်။ ထိလည်း ထိတယ် … အသားနာသွားတဲ့ ကြောင်သူခိုးတွေက အမှတ်သညာကြီးကြီးနဲ့ အိမ်ရှင်မကို နည်းမျိုးစုံနဲ့ ပြန်တိုက်ခိုက်ပါတယ်။
ထမင်းစားပွဲပေါ်က ဟင်းအုပ်ဆောင်းကိုတော့ သူတို့က အသားလေးတွန်းပြီး ဟင်းခိုးစားတတ်တယ်။ အရင်တုန်းက ပြူတင်းပေါက်တွေ အကုန်ပိတ်ထားတာတောင်မှ လူမရှိတဲ့အချိန် မျက်နှာကျက်ကနေဝင်ပြီး အုပ်ဆောင်းအောက်က ဟင်းခိုးစားလွန်းလို့ အိမ်အပြင်ကနေ မျက်နှာကျက်ထဲမဝင်နိုင်အောင် အပေါက်တွေအကုန်လုံး အသေပိတ်ထားလိုက်ရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် တစ်နေကုန်အိုက်လှောင်နေတော့ ပြူတင်းပေါက်ကိုတော့ တစ်ခါတစ်လေ ဖွင့်ရတာပေါ့။
၂၄ နာရီ ဂျူတီစောင့်နေတဲ့ ရောင်စုံသူပုန်တွေက ဖွင့်လိုက်တာနဲ့ ချက်ခြင်းဝင်လိုက်ပြီး တစ်ခုခုရအောင် ခိုးပါတယ်။ ခိုးစရာမတွေ့ရင် သေးပေါက် ချီးပါ လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ အိမ်ရှင်မကို အလွန်မုန်းနေတဲ့ ကြောင်ထီးတွေက အိမ်ရှင်မရဲ့ မင်္ဂလာအိပ်ယာထဲမှာ လစ်ရင်လစ်သလို သေးထိုင်ပေါက်တယ်။ စောင်တွေပေါ်မှာ ချီးပါခဲ့တာလဲ မကြာခဏပါပဲ။
တစ်နေ့တော့ ကြောင်သူခိုးအိမ်ထဲအဝင်မှာ အိမ်ရှင်မက ပြူတင်းပေါက်ကို ပိတ်ပစ်လိုက်ပါတယ်။ မီးဖိုချောင်ထဲမှာ ထိပ်တိုက်ရင်ဆိုင်တွေ့လိုက်ချိန်မှာ ကြောင်သူခိုး မျက်လုံးပြူးသွားပါတယ်။ ကြောင်သူခိုးက ကြောက်ကန်ကန်ဖို့ ကြိုးစားတယ်။ အခြေအနေအရ လူကိုကြောက်ရတာဆိုတော့ မျက်နှာကျက်အပေါက်ပေါ်ကို ကမူးရှူးထိုး ခုန်တက်ပြီး ခေါင်းမိုးအောက်ထဲမှာ နေနေပါတယ်။ အိမ်ရှင်မက မိန်းကလေးဆိုတော့ မျက်နှာကျက်အပေါ်အထိ တက်ပြီးမလိုက်နိုင်လို့ အောက်ကနေပဲ စောင့်ကြည့်နေရတာပေါ့။ ကလေးတွေကျောင်းကပြန်လာတော့ မေ့မေ့ပျောက်ပျောက်နဲ့ တံခါးဖွင့်ချိန်မှာ ထွက်ပြေးလွတ်မြောက်သွားပြန်ပါတယ်။
အဲဒီအိမ်ရှင်မက ငယ်ငယ်ကထဲက ကြောင်လေးတွေကို အလွန်ချစ်ပါတယ်။ ချစ်လွန်းလို့ အိပ်ရာထဲမှာတောင် လူကြီးတွေမသိအောင် ခိုးသိပ်ခဲ့တဲ့သူပါ။ အခု သူ့အိမ်နဲ့သူနေတော့မှ ရောင်စုံသူပုန်များနဲ့ ရင်ဆိုင်တွေ့နေရပုံကို သရုပ်ဖော်ပြနေတာ ကြားရသူတွေအတွက် ရီစရာကောင်းနေပေမယ့် တကယ်သူ့အိမ်ကို ရောက်သွားချိန်မှာတော့ ကိုယ်ချင်းစာမိခဲ့ပါတယ်။ တစ်ညလုံးအိပ်မရအောင် အော်ဟစ်သောင်းကျန်းနေတာကလဲ အိပ်ရေးပျက်ခဲ့ပါတယ်။ ဘယ်လိုနှိမ်နင်းရမယ်ဆိုတာတော့ အကြံမပေးတတ်ခဲ့ပါဘူး။ ခြံဝင်းထဲမှာ သင်းပျံ့နေတဲ့ ကြောင်ချီးနံ့များကလည်း ခေါင်းကိုက်ချင်စရာ၊ အိမ်ထဲမှာ လေကောင်းလေသန့်မရှိတဲ့အနေအထားကလည်း ခေါင်းမူးချင်စရာ၊ လှမ်းလို့မရတဲ့ မွေ့ယာပေါ်က သေးနံ့ကတော့ အန်ချင်စရာ ကောင်းနေပါတယ်။
ကျွန်မက ကြောင်ချစ်သူတစ်ယောက်ဆိုတော့ သူပြောတဲ့ ရောင်စုံသူပုန်များဆိုးသွမ်းပုံကို အရင်တုန်းကမယုံကြည်ခဲ့ပါဘူး။ ကြောင်ဆိုရင် ချစ်စရာကောင်းတဲ့အမူအယာရှိတယ်လို့ပဲ သိခဲ့ဖူးပါတယ်။ သူတို့အိမ်သွားလည်တော့မှ ရောင်စုံသူပုန်များကို ကိုယ်တွေ့မြင်ခဲ့ရပါတယ်။ ကျွန်မအတွက် ကြော်ထားတဲ့ ကကတစ်ငါးကြော်ကို တစ်ကောင်လုံး ချီသွားတယ်လေ။ ပြူတင်းပေါက် ဇီးမှန်တွေကနေကြည့်ရင် သူတို့ကို မြင်နေရပါတယ်။ ပြူတင်းပေါက် ဆန်းရှိတ်ပေါ်မှာ အိပ်နေလိုက်ကြတာ ကိုယ့်အိမ်ကိုယ့်ဟာမှ နေနေကြသလိုပဲ။ ကြောင်ဆိုတာ အမြင်ကတ်စရာတော်တော်ကောင်းပါလားလို့ ပထမဆုံးအကြိမ် ခံစားမိခဲ့တာနဲ့ ဒီပို့စ်ကိုရေးရင်း အဲဒီကြောင်တွေကို ဘယ်လိုနှိမ်နင်းရမလဲဆိုတဲ့ နည်းလမ်းကောင်းလေးများရှိရင်လဲ အကြံပေးကြပါလို့ (အသေသတ်ပစ်တဲ့နည်းလမ်းက လွဲရင်ပေါ့) …
တိရိစ္ဆာန်တွေလဲ သူတို့ဝမ်းစာအတွက် ကြိုးစားရင်းကနေ ဉာဏ်ရည်တွေ တက်လာကြတယ်နဲ့တူပါတယ် … ဘဝပေးအသိဉာဏ်တွေဖြစ်မယ်ထင်တယ်နော် … မုန့်ပုံးထဲမှာ မုန့်ထည့်ထားပြီး အပေါ်ကနေ စာအုပ်အထူကြီးနဲ့ဖိထားခဲ့တာကိုတောင်မှ ရအောင်ဖွင့်စားတတ်ကြတယ် …
ကြွက်ထရင် ကြောင်မွေးတော့ ကြောင်ထတော့ ခွေးမွေးကြည့်ပါလား
ခွေးမွေးရင်တော့ လုံခြုံရေးအရ တော်တော်ကောင်းတယ်
လူအမျိုးမျိုး စိတ်အထွေထွေ ဆိုသလို ကြောင်မှာလည်း အမျိုးမျိုး ရှိပါလိမ့်မယ်။ ဝေဝေက ကြောင်သူပုန်နဲ့တွေ့တော့ ဒုက္ခရောက်နေရရှာတာပေ့ါ။ ဓာတ်ပုံလေးတွေ ကြည့်ရတာတော့ ကြောင်သူတော်လေးတွေ ဖြစ်ပုံပေါ်တယ်။ ဒါပေမယ့် စကားပုံကလည်း ကြောင်သူတော် ကြွက်သူခိုးဆိုတော့ကာ……………
မဝေ တောင်းတဲ့ ကြောင်နှိမ်နင်းနည်းကို ဦးကြောင်ကြီးမှ အကြံပေးမည်ဖြစ်ပါကြောင်း ……..
ဦးကြောင်းကြီးက အမျိုးတူတွေဆိုတော့ ဘယ်လိုနည်းနဲ့ နှိမ်နင်းရမယ်ဆိုတာ ပိုသိမှာပေါ့နော် ……
အို…meelayကလည်း ဦးကြောင်ကြီးက အင်မတန်အမျိုးချစ်တာ
မဝေရဲ့ ကြောင်သူပုန်လေးတွေက ချစ်စရာလေးတွေပဲ
မထင်ရက်စရာ သူတို့ရုပ် သူတို့ရည်လေးနဲ လုပ်ရက်လ ိုက်ကြတာ တို့မဝေကြီးကို
ကြောင်ပုံလေးတွေက ချစ်စရာလေးတွေ ကြောင်ပေါက်လေးတွေနဲ့ တူတယ်။ မဝေရေ သူတို့ ခိုးမစားအောင် ကိုယ်က နေ့တိုင်းပန်းကန်နဲ့ အဝကျွေးရင်ရော။ ပြောသာပြောရတာ တော်ကြာကျွေးမှန်းသိလို့ ထပ်များလာရင် ဒုက္ခ။
အိမ်မှာ တရားဝင်ခေါ်မွှေးထားရင် လူနဲ့ အနေနီးပြီး ပြောရပိုလွယ်မလားမသိဘူးနော် . တိရိစ္ဆာန်တွေက လူနဲ့နီးရင် ပြောစကားနားလည်ကြပါတယ် .
ခုကျတော့ သူတို့လဲ ခိုးဖို့ချောင်းနေရတာ ပြီးတော့ ဒီနေရာ အီးပါ တို့ဘာတို့ လဲပြောလို့မရတော့ ပိုညစ်ပတ်နေမှာ။
မှတ်လောက်သားလောက်ရိုက်သာရိုက်။ ပြတင်းတံခါးကို သံပန်းတပ်ထား။ ခြံစည်းရိုးကို ဘလိတ်သွားအပေါ်ကကားထား။
ခွေးမွေးဆိုလို့ ကြုံလို့ပြောရအုန်းမယ် အိမ်က အယ်လ်ဇေးရှင်း ခွေးကတော့ ကြောင်က သူ့ပန်းကန်ထဲက အစာ ကို ခပ်တည်တည်နဲ့ ညတိုင်းလာစားနေတာကို မသိချင်ယောင်ဆောင်နေလို့ ကိုယ်တွေက လိုက်ပြီးမောင်းထုတ်နေရတယ် အဲ့လိုခွေးမျိုးမွေးမိလို့ ကတော့ …..အင်း.. …
အဲဒီကောင်တွေက ကြွက်တွေနဲ့တောင် မဟာမိတ်ဖွဲ့ထားတာဆိုတော့ ခွေးလောက်ကတော့ အေးဆေးပေါ့ … ခွေးမွေးဖို့မလွယ်တာတစ်ခုက ကားအဝင်အထွက်လုပ်တိုင်း ခြံစည်းရိုးတံခါးဖွင့်ချိန်မှာ ခွေးကိုချည်ထားဖို့ လူအပိုတစ်ယောက် မရှိတာလဲတစ်ကြောင်းပေါ့ …
ဒီကောင်တွေက နှစ်နဲ့ချီပြီး တိုက်စစ်ဆင်ခဲ့တာဆိုတော့ တော်တော်ကျွမ်းကျင်နေကြပြီ … လေ့ကျင့်ပြီးသား ကြောင်ကွန်မန်ဒိုအဖွဲ့ကိုငှားပြီး ပြန်တိုက်မှ ဖြစ်မယ် ..
ဝေဝေ အတွက် ဘင်လာဒင်စစ်ဆင်ရေးတုန်းက ကြောင်ကြီးကို ငှားရမယ် ထင်တယ်။
ရွာထဲက ကြောင်ကြီးလောက်နဲ့ မရလောက်ဘူး။
ခွေး က သခင်.ဒဏ်ခံတယ်တဲ.
ကဲ..ကိုကြောင်ကြီးရေ..ကျနော်တိုရွာသူက စစ်ကူတောင်းနေပြီ ဝိုင်းဝန်းကူညီလိုက်ရအောင်…
ကျနော့် စစ်ဆင်ရေးအကူအညီအနေနဲ့ အကြံပေးကြည့်မယ်…မဝေအိမ်းတွင်းဝင်ရောက်သောင်းကြမ်းနေသော အခြေအနေမဲ့ ကြောင်မိုက်များကိုနိုမ်နင်းရန် အင်မတန်ချောမောလှပသော ကြောင်မပျိုလေးတစ်ကောင်လောက်ရှာပြီးမွေးလိုက်ပါ၊ဒါဆိုရင် ဒီကောင်တွေ ပတ်လည်ရိုက်ပြီး အဝေမတဲ့ဖြစ်ခါ သူတို့အချင်းချင်း ဆော်ကြတော့မယ်….ဒီကောင်တွေစိတ်ဝမ်းကွဲသွားအောင်အရင်လုပ်မယ်..အချင်းချင်းချခိုင်းမယ်…သူတို့င်ချင်းချင်းရှင်းပြီးတော့မှ ကြောင်မလေးကိုသူတစ်ပါးအိမ်သို့ပိုလိုက်တော့…အဲဒီနည်းဘယ်ကရလည်းသိပါသလား….
ကြောင်ဖြူဖြူချောချောအမလေးတစ်ကောင် သူများပေးတာနဲ့ မွေးမလို့ စိတ်ကူးလိုက်ပြီးမှ သူတို့ရန်ကိုကြောက်တာနဲ့ မမွေးဖြစ်လိုက်ဘူး … ကြောင်မလေးကို သနားလို့ ..
ကြောင်ဝင်နိုင်မဲ့ ပြတင်းပေါက်တွေကို ၂ လက်မ သံဇကာကွက်ကာလိုက်ရင် ကြောင်မဝင်နိုင်တော့ပါ။ ၂ လက်မ ဇကာကွက်ကာရင် ဇကာကွက် ထဲမှ လက်နှိုက်၍ တံခါးပိတ်၍ မရတော့ပါ။ တံခါးပိတ်ရန် တံခါးရွက်လက်ကိုင်ကို ကြိုးဖြင့်ချည်၍ အတွင်းမှဆွဲပါ။
Nature ပြောတဲ့အကြံမဆိုးဘူး …. မီးဖိုထဲက ပြူတင်းပေါက်တွေကို သံဇကာကာလိုက်ရင် အဆင်ပြေမယ် … အဲဒီအတိုင်းပဲ လုပ်လိုက်မယ် …
အကြံကောင်းအတွက် ကျေးဇူးပါ ..
ကြောင်ပြသနာ ဖြစ်နေတာ ကြောင်ကို လိုက်ရိုက်တဲ့ လူ မဟုတ်တဲ့ မျက်နှာစိမ်းတယောက်ယောက်ကို အိမ်နောက်ဖေးလွတ်ပြီး အစာကျွေးခိုင်းပြီး ကြောင်လေးတွေကို ပွတ်သပ်ရင်း ရုတ်တရက် ဂုန်နီအိတ်ထဲ ထည့်ပြီး လွတ်ရာ ကြွတ်ရာ သဂျီး အိမ်မှာ သွားပြစ်လိုက်ပါ။
ရေခြား မြေခြား သွားတော့ ပြန်လာမှာ မဟုတ်တော့ဘူး။
ဒီကောင်တွေ လည်လွန်းလို့ နှစ်နဲ့ချီပြီး သောင်းကျန်းနေတာပေါ့ … ကြွက်ထောင်ချောက်လိုမျိုး ကြောင်ထောင်ချောက်လုပ်ဖမ်းနိုင်မှ ဖြစ်နိုင်မယ် …
ဆူးရယ် ကြောင်တွေ ပြန်မလာနိုင်တာက ရေခြားမြေခြားလို့လား။ ဘဝခြားသွားလို့လား။
တစ်အိမ်လုံးကို သံဇကာ ကာလိုက်ရင်ဝင်လို့မရနိုင်ဘူးထင်ပါရဲ့။
ဟုတ်တယ်နော် ရေနဲ ့ပက်ပြီးမောင်းထုတ်ရင်ထုတ် ဒါမှမဟုတ်ရင် ဦးကြောင်ကြီးဆီမှာအကူအညီတောင်းကြည့်ပါလား